Intel oo soo saaraysa Next Generation Desktop Computers - Rule News
Intel oo soo saaraysa Next Generation Desktop Computers
CHIPMAKER Intel ayaa soo bandhigay hindisayaal dhowr ah oo ay ku jiraan kumbiyuutarada desktop ku shaqeeya by chips updated la Iris naqshadeynta Pro, inkastoo suuqa PC gaabis.
Sababaha qaab cusub soo socda ee sanadkan waxaa ka mid ah kumbiyuutarada mini oo la qaadi karo oo dhan-in-mid hababka, kaas oo kasoo muuqan doona Ready Mode Technology oo kuu ogolaanaya in PC a in xirnaado xitaa marka ay tahay dawlad xoog-badbaadinta ah.
Intel afaraad gen core chip si xoog desktops soo socda gen
fasalka cusub ee qalabka waa PC ka dhisay galay touchscreen a 20Maalintaas la batari oo awood u leh inay booska galay saldhigga tabaneeyo a.
Deutsch: Intel core i7-970 hoose (credit Photo: Wikipedia)
Inkastoo ay hoos u nidaamka PC desktop dhaqameedkeena iyo laptops iyo qalabka kale marka la barbar dhigo, Intel rajeynaya ay line cusub soo noolayn doonaa suuqa PC dhibtoonaya by awoodaha ku daray loogu talagalay in ay racfaan ka qaadan ganacsatada iyo macaamiisha isugu.
“ganacsi desktop waa gabal weyn oo muhiim u ah Intel, oo waxaannu maal waxa ku jira – ikhtiraacida arrimo foomka, waayo aragnimada iyo waxyaabaha loogu talagalay macaamiisha our,” ayaa sheegay in Intel xigeenka iyo GM ay Desktop Client Platform Group, Lisa Graff.
Sidoo kale kumbiyuutarada foomka factor yar sida Intel ee NUC (Unit Next ee barashada Kombiyuutarka), chipmaker ku soo bandhigay design dhan-in-mid tixraaca loo yaqaan Black Brook, kaas oo kasoo muuqday touchscreen ah Windows 8, bandhigay ilaa tirada in 27Casaryaah, iyo batteriga gudaha ah sidaa daraadeed waxa loo isticmaali karaa iyada oo aan la tethered in bareesada darbiga ah.
Black Brook ka mid ah camera Intel Realsense 3D dhafan, makarafoonka Bawdada soo diyaariyeen a, audio premium iyo qaab HD full.
Intel sidoo kale faahfaahsan Processor Core qarniga afraad cusub ka dib soo socda ee sanadkan, oo ay ku jiraan dulqaaday kasameeyo Devil ee Canyon la kaamerada hagaagay interface iyo processor baakadaha ah si aad u oggolaatid overclocking, iyo a i7 Core ba'an Edition taageeraya ilaa sideed diirkja iyo 16 threads la taageero xasuusta DDR4.
Intel ayaa sidoo kale sheegay in ay yeelan doonaan versions of desktop chips soo socda ay jiilka shanaad Core kasameeyo Broadwell, kaas oo si desktop ka keeni doonaa Iris muuqaallo ay Pro markii ugu horeysay in ay samatabbixin boost a in naqshadeynta waxqabadka.
Technology Mode Ready, kaas oo laga heli karaa on nidaamyada OEM dooro in doonta 2014, waxaa lagu tilmaamay sida awood ah in ay qaadataa faa'idaystaan ​​dalalka awoodda lagu badbaadinayo ee chips Core qarniga afraad Intel ay u awood kumbiyuutarada si ay u sii diyaar iyo xitaa mar walba ku xiran marka ee gobolka awood-badbaadinta ah. Waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo si loo hubiyo in PC ah mar walba diyaar u yahay inuu sii qulquli warbaahinta in qalabka kale ee guriga, tusaale ahaan, sida laga soo xigtay shirkadda.
Bishii December, Kooxda falanqeeye IDC sheegay in iibka PC ka gaabsaday ka xun ayaa la filayay in 2013, sida casriga ah iyo kiniiniyada sii waday in ay qabsato suuqa technology macaamilka.
“shixnadaha PC Worldwide by dhacay -10.1 boqolkiiba sanadkii la soo dhaafay,” IDC yiri, wax yar ka badan qiyaas hore ee -9.7 boqolkiiba, taas oo ka dhigaysa “by foosha sannad kasta ilaa hadda ugu daran on record”. m
article Tani, Intel soo bandhigaya kombiyuutarada desktop jiilka xiga inkastoo suuqa PC dhibtoonaya, waxaa syndicated ka weyddiista oo waxaa halkan posted
22346	0 Broadwell, unit Central processing, computer desktop, Intel, Intel Core, Unit Next ee barashada Kombiyuutarka, computer Personal, Windows 8
← Jebiyayaasha weerarkii Goobaha NATO ! Aadanuhu lagu ogaan karaa hal trillion urta →